Semalt Expert Shares Vidéo Marketing Tips Tokony ho fantatry ny SEO Champion rehetra
Amin'ny fampivoarana an-tserasera, ny safidy fitadiavana motera (SEO) dia manan-danja ho an'ny ankamaroan'ny olonamaniry ny hanao ny raharaham-barotra ho lava. Ny fanamafisana ny votoaty dia mora satria tafiditra amin'ny paikady fantatra. Na izany aza, marketing marika nomerikaIreo masoivohon-tsika dia mahita ity hetsi-panoherana ity, indrindra rehefa tsy mahafantatra ny tokony hatao. Ny lahatsary fikarohana ao amin'ny Video Search dia ilaina amin'ny aterineto rehetraafa-po - gallery software. Nanomboka tamin'ny taona 2006, Google dia nividy YouTube ary hatramin'izao, ny fampiasana ny SEO amin'ny horonantsary horonantsary dia manan-danja toy ny amin'ny votoaty hafa an-tserasera.
Ny ankamaroan'ny orinasa dia mahita ny lahatsary amin'ny fomba samihafa. Ohatra, FAQ maro aryNy lesona dia mitaky ny fitaovana amin'ny lahatsary fampahalalana tsara. Raha fantatrao ny maha-zava-dehibe ny SEO ho an'ny horonan-tsary dia mety manontany tena ny fomba hampiharana izany.
Andrew Dyhan, mpitantana ny Success Successor Semalt Digital Services, dia mamaritra toro-hevitra marobe maromaro izay afaka mahatonga ireo horonantsary hanome anao toerana ambony kokoa:
Ny halavan'ny votoaty.
Zava-dehibe ny mampiditra ireo teny manan-danja ao anatin'ny biraon'ny rakitsoratry ny hafatrao. Lahatsary iraytokony hiasa toy ny lahatsoratra ao amin'ny lahatsoratra bilaogy. Ireo horonantsary dia tokony ho feno, fampahafantarana ary fohy. Maro ny fanadihadiana milaza faNy mpampiasa dia mandany 2 minitra eo amin'ny lahatsary. Tazony lavitra ny lahatsarinao: 5 minitra eo ho eo. Mampitombo ny fandrakofana iraisam-pirenena ny lahatsaryny votoatinao ary manome sehatra informatika ho an'ny mpikatroka mavitrika mba hikirakira sy hitadiavana votoaty mifanaraka amin'izany..Video mandrayMizara amin'ny sehatra toy ny YouTube. Ny botsika Google dia afaka manangona ny rohy amin'ny ankapobeny izay lasa rafitra ho an'ny maro an'isany tranonkala.
Ny tanjon'ny lahatsary.
Ny vina, ny tanjona ary ny lanjan'ny horonantsary SEO video no tena fototr'izanyDiniho. Afaka manangana fampielezan-tserasera mahomby amin'ny alalan'ny iraka mafonja ny olona. Kanefa, ny tanjon'ny lahatsary dia misy fiantraikany lehibemomba ny maha-zava-dehibe ny olona mampiasa azy ireny. Ohatra, lahatsary natao ho an'ny marika dia mety hampahalala sy hampiditra azy mividy fomba ankehitriny. Na dia izany aza, ny lahatsary fiantohana orinasa momba ny fanabeazana dia mety tsy manana azy ireny.Fa kosa, izy ireo dia manan-danja kokoa amin'ny fandefasana teny filamatra.
Fanamafisana sy fandresen-dahatra.
Raha mitady lahatsary an-tserasera ny olona, ​​dia ny ankamaroan'ny olona no jerenaDiniho. Ny lahatsary miaraka amin'ny fitarihana na ireo izay afaka manaparitaka ny fizarana dia iray amin'ireo fomba mahazatra indrindra amin'ny fahazoana fomba fijery tsy mitsaha-mitombo.Teknolojia maromaro no mety hahatonga ny horonantsary hanatratra ity ambaratonga manaraka ity. Ohatra, ny fampidirana fanodinana fihainoana. Afaka mametrakadikateny, soratra ary fanazavana momba ny lahatsary. Io fomba io dia mamporisika ny fahitana sy ny fihetseham-po amin'ny haino aman-jerymampitombo ny maha-zava-dehibe.
Ao amin'ny SEO amin'izao fotoana izao, ny famoronana votoaty sy ny dokam-barotra video dia teknika vaovao izaydia manana fiantraikany lehibe amin'ny tetika SEO maro. Ny mpiara-miasa amiko sy ny ahy dia manoro hevitra amin'ny fampiasana io tetika io ho an'ny mpanatrika izaydia manondro video ho fanazavana. Na dia mety ho samy hafa aza ireo hevitra roa ireo, dia samy manana tetikady ara-barotra nomerika izy ireo ary manana nyfahafahana mampitombo ny fifanakalozan-kevitra. Ny lahatsary dia tsara amin'ny fanazavany ary koa ny fitarihana ny mpijery ny toerana hanaovana azyasan'ny hetsika ao amin'ny tranokalanao. Vokatr'izany, ny marketing ho an'ny video dia mety ho vahaolana amin'ny asan'ny fametrahana ny tranokalanao, indrindra indrindramilina fikarohana.